Yakadhindwa Nylon Webatch，Pvc Yakabikwa Webping Suppliers，Tsika Polyester Pvc Jacquard Webatch
KUKOSHESA ZVAKAWANDA WEBBING
Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, inosanganisirwa nemafambisirwo epamberi ekugadzira uye epamusoro zvigadzirwa zvekugadzira zvinogadzira zvigadzirwa zvepasi rose zvewebhu webhu izvo zvinotsigirwa nekambani ISO9001 certification. Tichave nechokwadi kuti zvigadzirwa zvedu zvese zvinosangana nemitemo yakasimba uye nekusimbisa vatengi vedu. Pasinei nechokushandisa, yakakwirira-mhando webhusa zvigadzirwa inovimbiswa.
Jingye Webwing ndomumwe wevanotungamira vagadziri uye vatengesi vekumusoro-mhando, kukosha-kwakawedzerwa webhu mhinduro kumafashoni zvipfeko, kwemauto kuficha uye zvigadzirwa zvekunze, zvakaringana zvishandiso, zvichingodaro. Nehunyanzvi hwedu ruzivo uye hupfumi ruzivo, zvakasanganiswa nekutsigira kwakasimba uye kutsigirwa kunobva kumafekitori edu, tinokwanisa kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana siyana zvewebhu.
ROPOTO YEDU YOKUGADZIRA
Jingye Webatch inopa yarn uye webatch kugadzirwa, kunaka kudzora, co-kugadzirwa uye musangano musangano muChina mose uye kune dzimwe nyika. Yedu mutemo ndeyekupa mutengi zvinhu uye mabasa kune izvo zvakabvumiranwa zvinodiwa maererano neruzivo uye mutengo. Iyo Kambani yakazvipira kuita kugutsikana kwevatengi nekushandiswa kwemaitiro ezvemukati ayo anoitwa kusangana kana kudarika izvo zvinodikanwa zve ISO 9001.
Zvimwe zvinopfuura 20 makore, matekinoroji edu haana kumborega kushanda pakuvandudza webhu kunaka, kuwana wepamusoro ruvara kukurumidza, kukura kukuru simba, kuti iite yakasimba, more ganda-hushamwari, kwakanyanya nharaunda, uye kuti iipe isina mvura, murazvo wemoto, anti-infrared uye anti-ultraviolet zvivakwa. Kuti ushandire zviri nani vatengi, isu tinotevedzera mutemo we "kunaka kutanga, basa kutanga". Tariro basa redu rekufunga rinofambidzana newe chero nguva.
Jingye Webwing inogadzira webhusaiti yepasi rose uye inopa weCustom Quality Webwing, Gravity Webatch, Mauto Webatch, Kuchengetedza Webhu uye Zvakanyanya Kudikanwa Kubata Webhu
Polyester yakadhindwa elastic kudhonza
Polyester yambiro pawebhu
Polyester inoratidzira kubaya
Polyester twill kupisa kupisa kudhindisa kudhonza webatch
Nylon tubular webatch
Nylon jacquard pawebhu
Nylon yakakwirira elasticity jacquard kudhonza
Adress: B1 Kuvaka,A5 mudunhu,Buyong Tongfuyu Industrial Park,Shajing Town,Bao'an Ruwa,Shenzhen Guangdong,China
Copyright © 2022 Shenzhen Jingye accessories Co, Ltd mazwi ekushandiswa uye Yakavanzika Policy